Qurxinta beerta Dareenka farshaxanka - fikradaha guriga iyo beerta
16.04.2012 Waxa Dhejiyay: Maskaxda Farshaxanka
Diyaarinta iyo muuqaalka jardiinada, Beerta, Qurxinta beerta, Fikradaha Guriga
Fikradaha qurxinta jardiinooyinka cusub.
Qaar ka mid ah talo soo jeedinno ku saabsan sida looga dhigo jardiinadeenna qurux.
Xilliga Guga waa xilliga aan ku beero ubaxa oo aan u qaabeyno buul-garaaca shaqsiyeed iyo bannaanka beerta. Iyada oo la adeegsanayo isku dhaf farshaxan oo ah waxyaabaha maalin kasta dhaca iyo dabeecadda, waxaan ku guuleysan karnaa natiijooyin cajiib ah. Ha iloobin soo jiidashada dhoobada dheriga ah, laambadaha birta ka samaysan, xabadka alwaax, waxyaabaha dabiiciga ah - dhagax iyo alwaax. Si qurxoon oo loo qurxiyey, waxay qaabayn doonaan meesha ubaxyada lagu beeri doono ama alaabada beerta la dhigi doono.
Xarig qurxin leh xargaha, geesaha ama buundo alwaax yar ayaa ah qaabab badanaa loo isticmaalo oo ka dhigaya jardiinadeennii mid qurux badan oo soojiidasho leh. Iyo dabcan, element waajibku - ubaxyada. Xullo noocyo kala duwan oo ubax ah xilliyo kaladuwan si aad had iyo jeer u hesho jardiinooyin qurux badan oo midab leh.
abaabul, diyaarin beero, beerta, qurxinta, qurxinta beerta, qurxinta beerta, geed, fikradaha, fikradaha beerta, dhagax, qurux badan, jardiinooyin qurux badan, alaabta guriga, laabta, laambadaha, ubax, fikradaha guriga, nashqadeynta gudaha, alaabta guriga, fikradaha gudaha, naqshadeynta fikradaha, guri casri ah, qurxinta fikradaha, fikradaha fanka
Easter waa soo socdaa waana inaan go’aansanaa waxa qurxintayadu waxa ay noqon doonto. Farshaxanimo ama dhaqan ahaan ...
Macmacaan miro qurux badan loo adeegay
Ku adeegso midhaha qaab cusub oo aan caadi ahayn u sameysan tufaax qurux badan. Waad ku dari kartaa ...
Fikradaha loogu talagalay isbedelka beerta iyo kuraasta
Sagaal fikradood oo asalka iyo farshaxanimo ah oo loogu talo galay alwaax alwaax ama barxadda beerta.
U samee naftaada beerta dhexdeeda
Dhirta kala duwan ee beerta waxay leeyihiin baahi daryeel oo kala duwan. Haddii ay tahay ...
Ubax wareega ama geedaha daaqa
Dhisidda carrada madaxa bannaan ee duurka ku taal, sidii aan horayba ugu soo sharaxnay fikradda & is ...
Fikradaha leh baakado loogu talagalay terrace, balakoonka iyo balbalada
Waxaan kuu soo bandhignay soo-jeedinno xiiso leh oo loogu talagalay bannaanka, balakoonka iyo balbalada. Tareenka ...
Qurxinta quruxda badan ee loo yaqaan 'terrace'
Markaan ku nool nahay guri magaalada ah, nooca guri, sida kaliya ee aan ugu magdhowno la'aanta ah ...
Lix fikradaha qolka jiifka asalka ah
Waxaan soo bandhigi lix fikradood oo qolka fadhiga ah oo qurux badan oo asal ah - iskudhafan ...